Botnet Infection: Chii Chaunoziva Pamusoro Penyaya Iyo? - Semalt Tips Uye Tricks
Botnet, iyo inozivikanwa se bot network kana zombie hondo, inhare yakawanda yemakombiyuta ane utachiona. Iyo malware inovhara makombiyuta aya uye inoshumira vanotambudza. Vanowanzotungamira kubva kumazana kusvika kune zviuru zvemakombiyuta uye mafoni, uye mabhota anowanzoshandiswa kutumira spam, mavairasi, uye malware kumasangano. Vanobatsirawo mukubira ruzivo rwemunhu oga uye nekurondedzera DDoS kurwisa. Jack Miller, iyo Semalt Mutevedzeri Mukuru weVatengi vanobudirira, inotaura kuti botnets inofungidzirwa kuti ndeimwe yekutyisidzira kukuru paIndaneti uye inofanirwa kubviswa nokukurumidza nokukurumidza.
Ko mabhutsi anobva kupi?
Kuti uve chikamu chebhodeni, kombiyuta inofanira kutapukirwa nemamwe majekiti kana chirwere chetachiona iyo inogona kutaurirana newaini inosunungura kana mamwe makombiyuta ane utachiona mumutambo - casino 150 tour gratuit. Vanowanzotora simba rekushandisa yako uye vanoshandiswa kutumira mirayiridzo kubva kune vanotya kuita mabasa avo chaiwo. Vatengesi nevatadzi vanorova mazita emasita, mapepasi uye mamwe mashoko nerubatsiro rwebhodnets. Izvo zvinokonzerwa ne-botnet malware hazvisi zvakasiyana nemararamiro evanhukadzi.
Tinoziva sei mabhota?
Tinokwanisa nyore nyore kuona mabhennets kana kombiyuta yedu kana mafoni ekutapukirwa ane utachiona nenzira imwechete. Zviratidzo zvinoratidza kuti kombiyuta yako ine utachiona inosanganisira kupera kwekombiyuta yako, zvisingashamisi maimeri, zviito zvisingaoneki, mhinduro dzisina kururama, uye mafaira asingakwanisi kuvhura zvakanaka. Izvi ndizvo zviratidzo zvinogona kuitika kune mumwe munhu ari kuedza kuba yako data uye akashandisa kombiyuta yako kure nechokuita sebandaneti. Kana kakombiyuta yako inoderera pasi, iwe unogona kunge uri kubatwa nebhokisi.
Nzira yekuchengetedza sei makombiyuta edu kubva kubhota?
Tinokwanisa kubvisa makombiyuta edu kubva kumasetaneti e-botnet nokuisa mamwe anti-malicious kana antivirus mapurogiramu anogona kubvisa mabhoti akawanda kubva kumashandisi edu sezvazvinogona. Nzira yakanakisisa ndeyokushandura antivirus scans pamakombiyuta edu nguva dzose. Iwe unogona zvakare kuedza anti-botnet zvigadzirwa zvinobva zvabvisa malware kubva pane yako.
Nzira dzakanakisisa uye dziri nyore dzokudzivirira botnet malware:
Unofanirwa kuisa purogiramu yemavhidhiyo yakavimbika uye ine simba pane kombiyuta yako kana kuti device
Unofanirwa kuisa sarudzo dzekugadzira
Unofanirwa kuchenjerera kana ukazarura kana kuvhara chimwe chinhu pane internet
Kuchengetedza makombiyuta kubva pakuva maZombi muuto re botnet, iwe unofanirwa kudzivisa kutora mapurogiramu anotyisa uye mafaira. Uyezve, haufaniri kuvhara pazvibvumirano zvisingazivikanwi kana kuti zvinyorwa zvekutsvaga zvemairire zvausingazivi. Nguva dzose yeuka kuti zvinhu zvose izvi zvinogona kunge zvine bots uye zviripo kuti zvipinde mazviridzwa. Uyewo, unofanira kuchengeta mapepa, mawindo, uye antivirus mapurogiramu anovandudzwa uye ramba uchitarira maitiro uye zvinyorwa zvekuchengeteka kwako. Chengetedza chigadzirwa chako nemagetsi antivirus ane simba zvakadai seAvast Antivirus software. Inobatsira kudzivirira kombiyuta yako kana chipangizo chekushandisa kubva kune utachiona ne-malware, botnets, uye virusi.